Home Wararka Xog: Ciidankii Eritrea oo lasoo wado. “Waxay qaban doonaan magaalooyinka Jowhar,...
Xog: Ciidankii Eritrea oo lasoo wado. “Waxay qaban doonaan magaalooyinka Jowhar, Beledweyne & Kismaayo”
Waxaa la qorsheynayaa in dhawaan dalka dib loogu soo celiyo 7500 ka mid ah ciidankii tababarka loogu qaaday dalka Eriteriya sida aay MOL u sheegeen saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Ciidanka ayaa ku soo beegan magaalada Muqdisho horraanta bisha Febraayo, waxaana maalmaha aay ku degi doonaan xerada Ciidanka Gordon, iyadoo si ku meel gaar ah looga raray xerada taliska ciidanka lugta uu hoggaamiyo General Biixi.
Previous articleSomalia iyo Imaaraadka oo iska kaashanaya horumarinta Dhaqaalaha
Next articleMidowga Musharaxiinta oo soo saaray digniin culus kana hadlay laba arrin
MW Farmaajo oo lagu wado in uu maanta soo gaaro magaalada...
Wararkii ugu danbeeyay iska hor imaad ciidan oo ka dhacay Laascanood